Lahatsary momba ny “One Billion Rising” Hetsika Manerantany miady ho an’ny Zon’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Lahatsary momba ny “One Billion Rising” Hetsika Manerantany miady ho an'ny Zon'ny Vehivavy	Voadika ny 20 Febroary 2013 10:08 GMT
Zarao: Flashmob tany Waisenhausplatz – Bern, Soisa
Vehivavy iray ao anatin'ny telo no iharan'ny herisetra amin'ny fiainany. Tamin'ny 14 Febroary 2013, olona aman'arivony manerantany no nanao fihetsiketsehana nanohitra ireo herisetra andavanandro tamin'ny alalan'ny dihy-flashmob [fihetsika mirindra], hetsika artistika sy maro hafa. Teo ambanin'ny teny faneva “One Billion Rising” [“Iray Miliara Mijoro”] no nanao fihetsiketsehana amin'ny anaran'ny vehivavy iray tapitrisa manerantany izay iharan'ny vono na fanolànana amin'ny fiainany izy ireo, araka ny fanadihadina nataon'ny Firenena Mikambana.
Tany amin'ny firenena toa i Afganistana, Pakistana ary Bangladesh dia nidina an-dalambe ihany koa ny vehivavy.
Flashmob teo amin'ny Polyterrasse ETH any Zürich, Soisa
Fikambanana mihoatra ny 13.000 tamina firenena miisa 200 no nandray anjara tamin'ity hetsika manerantany ity. Ireto manaraka ireto misy lahatsary vitsivitsy tamin'ny 14 Febroary.
Flashmob tany Bern, Soisa:
Ny fikambanana “United Societies of Balkans” dia nandrakitra lahatsary misy lehilahy sy vehivavy manerantany manazava amin'ny “One Billion Rising” ny antony nahatonga azy ireo nidina an-dalambe tamin'ny 14 Febroary:
Tatitra nataon'i NDTV tany Mumbai, India:
Ity dihy manaraka ity dia nomanina ary nataon'ny tovovavy avy ao amin'ny “New Light”, fikambanana tsy miankina iray miasa ao amin'ny tanànan'ny mpivarotena any Calcutta, India:
Lahatsary tany Khartoum, Sodàna:
Oronantsary “Stop-Motion” tany São Paulo, Brezila:
Flashmob tany Bali, Indonezia:
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraClaudia Blaser
Nandika (en) i Monia Raupert
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Français, Nederlands, Español, Aymara, Català, বাংলা, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Deutsch
FanoheranaMediam-bahoakaVehivavy sy MiralentaZon'olombelona